Akụkụ Ahụmahụ Ọmịlị Ahụmahụ Ahụmahụ Ntanetị dị egwu
Mozenda bụ ngwanrọ weebụ nakọta ozi dị mkpa gafee Internet. Mozenda ihe ntanetị weebụ na - emepụta ihe nchọgharị weebụ nke mmadụ iji weghachite ozi kpọmkwem site na weebụ. A na-ezube nchupu iji weghachite data ndị a na-adịghị edozi na Ịntanetị ma na-echekwa data na usoro ndị a pụrụ ịhazi.
Ọrụ Ngwá Ọrụ Mozenda
Ọ bụrụ na ị nweta ntanetị weebụ, zuru oke na ntụkwasị obi bụ isi ihe abụọ ị ga-atụle. N'oge gara aga, iwepụta data sitere na weebụsaịtị ahụ bụ ihe a na-apụghị ịdabere na ya ma dị oke ọnụ. Ụzọ kachasị mkpa nke iwepụta ozi dị mkpa sitere na weebụ gụnyere idepụta ihe omume pụrụ iche nke na-arụ ọrụ n'ịdọpụta data site na ederede HTML buru ibu na ibe weebụ.
N'afọ 2007, usoro nchịcha gbanwere mgbe ndị mmepe Mozenda kwalitere usoro ihe omume nchịkọta data site na weebụsaịtị n'enweghị mmemme. Usoro ihe omume ahụ nwere ike ịchọpụta ederede kachasị amasị na ibe weebụ site na iji nọmba ekwentị na adreesị email. Kemgbe ahụ, a na-emezi ahụmahụ na-emecha ahụ ka oge na-aga.
E nwere nnukwu data dị na Ịntanetị iji mee ihe maka ịzụlite atụmatụ ahịa na nkwado ngwaahịa. Otú ọ dị, ozi ahụ dị na ụdịdị adịghị adaba na usoro usoro gị. Nke a bụ ebe Mozenda batara. Ịdebe data sitere na ebe nrụọrụ weebụ site na iji Mozenda dị nro dịka ịmalite igwe gị.
Gịnị mere ị ga-eji wụnye Mozenda?
Mozenda web scraper ngwa ngwa weghachite data weebụ n'ime amamihe ego site na wepụ data na usoro eji eme ihe. O doro anya na Mozenda bụ ihe ntanetị kacha mma na ụlọ ọrụ ahụ. Ngwaọrụ bụ otu n'ime ụdị ya. Dịka ihe nchọgharị gị, Mozenda na-eji njirimara onye ọrụ enyi-enyi. Iji wepu data sitere na weebụ, weputa ihe edere ederede gi, ma wepuo ya na Mozenda.
Oge nchịkọta data bụkwa ihe dị mkpa na nchịkọta weebụ. Na Mozenda, ị nwere ike iji nchịkọta nke ọma site na ibe weebụ na oge a kapịrị ọnụ, na-enweghị nrụgide na ngwaike na-akụda. Ọ bụghị onye mmemme, enweghị ohere maka ụjọ. Mozenda web scraper na-enye ndị dị elu atụmatụ dị ka FTP, DOM, XPath, RegEx, na API.
Ọ bụrụ na ị na-atụle ịchọta ọtụtụ narị interns iji dozie-debe data ụbọchị niile, ịkwesịrị ịmegharị atụmatụ gị. Na Mozenda, ịkwesighi onye mmemme iji wuo gị ngwọta ntanetị weebụ. Mozenda nwere ihe nchọgharị weebụ gị niile kpuchie. Enwere otutu data na echere gi n'ofe Intanet.
Uru nke ịwụnye ihe nchọgharị weebụ na Mozenda
Mgbe ị wụnye Mozenda na kọmpụta gị, ị gaghị achọrọ ọtụtụ puku ndị ọrụ iji zọpụta usoro nhazi. Onu ogugu nke ndi ozo abanye na ike 2. Mgbe ị na-ahọrọ Mozenda, ị kwenyere na ị ga-arụkọ ọrụ aka na otu ndị nkwado na ndị nkwado. Ọ bụrụ na ị na-enweta ihe ịma aka ọ bụla mgbe ị na-ehichapụ data sitere na weebụsaịtị ahụ, gwa ndị ọrụ enyemaka Mozenda maka enyemaka.
Mozenda kwadoro otu ndị na-enye ọrụ ntanetị weebụ na usoro ọzụzụ ọzụzụ maka mmalite. Mee mkpebi mmepụta ego ziri ezi na nyochaa usoro atụmatụ gị. Gbalịa chọpụta ezigbo data na Mozenda webvraper nke na-aga n'efu gburugburu weebụ Source .